Mogadishu Journal » 2019 » January » 9
Mjournal ;Wasiirka Amniga Gudaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Ducaalle ayaa maanta magaaladda Muqdisho ka furay Shir wada-tashi ah oo ku saabsan ka Hortagga Qaraxyada gacan ku sameyska ah. Shirkan ayaa ka qeyb galay Qaar kamid ah Saraakiisha Amniga,...
Mjournal :-War saxafadeed kasoo baxay xafiiska Howlgalka Qaramada Midoobe ee Soomaaliya ee loosoo gaabiyo UNSOM ayaa ugu horeyn loogu hambaliyeeyay Madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa cusub ee shalay loo doortay maamulka Puntland. Isla warkaasi ayuu Ku-simaha Ergeyga gaarka ah ee...
Mjournal :-Baadari u dhashay dalka Kenya ayaa Muddo ku dhow Shan Sano waxaa uu ka waday Magaalada Muqdisho faafinta kiristaanimada sidda uu shaaciyay Wargeyska wordandway.org. Ninkaan Magaalada Muqdisho meel ka mid ah degan oo sababo Amni loo qariyay degmada ay tahay ayaa waxaa...
Mjournal :-Madaxweynaha cusub ee Puntland Dr. Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta la kulmay taliyaasha iyo saraakiisha ciidamada Puntland isagoo kala hadlay adkeynta ammaanka Puntland. Madaxweynaha cusub ee Puntland oo uu kulankan ku wehelinayay Madaxweyne ku xigeenkiisa Axmed...
Mjournal :-Dowlada Ingiriiska ayaa qorsheyneysa inuu saldhig Milatari uu ka furto deegaan ka mid ah Maamul goboleedka Somaliland. arkan ayaa soo baxay kadib markii Xoghayaha gaashaandhigga UK Gavin Williamson uu Isniintii booqasho ku tegey magaalada Hargeysa lana kulm...
Mjournal :-Ergeyga gaarka ah ee Urur Goboleedka IGAD u qaabbilsan Soomaaliya, Dr, Maxamed Cali Guuyo, ayaa hambalyo u diray Madaxweynaha cusub ee Puntland, Siciid Maxamed Deni, oo Shalay ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday Garoowe. Dr, Guuyo, ayaa sidoo kale...
Mjournal :-Dowladda Mareykanka ayaa war kasoo saartay duqeymihii ugu dambeeyay ee ka dhacay Koonfurta Soomaaliya, waxaana ay sheegtay in duqeymahaasi lagu dilay xubno badan oo ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in duqeyntii ugu horeysay ka...
Mjournal :-Kulamo kala duwan oo looga hadlaayo Xaaladda Puntland ayaa ka socda Magaalada Garowe ee Caasimadda maamulka Puntland. Guddigii dowladda Soomaaliya ay u dirtay Magaalada Garowe ee Wasiiradda ahaa ayaa kulamo kala duwan leh Waxgaradka iyo Madaxweynaha cusub ee la...